အခမဲ့သဘောင်္နှင့်အခွန်မပါ ၀ င်သော Vintage Multilayer Leather Braided အမျိုးသားလက်ကောက်ကိုဝယ်ပါ WoopShop®
သတ္တုအရောင် 3pcs ကြယ်ပွင့် ဇီးကွက် 5pcs 1 အထုံး 5pcs BR18Y0543 BR18Y0544
အရှည် ချိန်ညှိ 20cm
ချိန်ညှိ 3pcs / 20cm ချိန်ညှိစတားရွက် / 20cm ချိန်ညှိဇီးကွက် / 20cm ချိန်ညှိ 5pcs 1/20cm ချိန်ညှိထုံး / 20cm ချိန်ညှိ 5pcs / 20cm ချိန်ညှိ BR18Y0543 / 20cm ချိန်ညှိ BR18Y0544 / 20cm
စပျစ်သီးပြွတ်အလွှာသားရေကျစ်ပြီးယောက်ျားလက်ကောက် - 3pcs / 20cm ညှိနိုင်သည် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
Clasp အမျိုးအစား: Hidden-Safety-clasp
အခါသမယ: လက်ဆောင် / မင်္ဂလာဆောင် / ပါတီ / မွေးနေ့
လက်ကောက်ပစ္စည်း: ကြိုး + သားရေ + ပုတီးစေ့
အရောင်: pic အဖြစ်
အရွယ်အစား: ချိန်ညှိ 20cm
ကျား၊ မ - အမျိုးသားများအတွက်ကျောက်မျက်လက်ကောက်
အရည်အသွေးကောင်းလုပ်ချစ်စရာလက်ကောက်။ ငါမြန်မြန်လာတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်ကံကောင်းပါစေ
အဆင်ပြေဆက်ဆံမှုအလွန်အေးမြကြည့်ရှု, သူမ၏သမီးအဘို့အမိန့်, သူမအလွန်ပျော်ရွှင်ပါ!
ဤဈေးနှုန်းနှင့်အတူစိတ်ကူးယဉ်။ အရည်အသွေးကောင်းသည့်လက်ကောက် ၅ လုံး - မကြားဖူးသောရက်ရောမှု၏ဆွဲဆောင်မှုအချို့! လျင်မြန်စွာကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ အရမ်းသဘောကျ